अमेरिका र इरानबीच अहिले युद्धको स्थिति बनेको छ । ओमानको खाडीमा तेल बोकेका दुईवटा मालवाहक जहाजमा १० दिनअघि बम आक्रमण गरिएपछि अमेरिकाको ट्रम्प प्रशासनले यसमा इरानी बलहरूको हात रहेको भन्दै आरोप लगायो ।
विवाद चर्किंदै जाँदा अमेरिकाले उक्त क्षेत्रमा सैनिक युद्धपोतहरू तैनाथ गर्‍यो । यसैबीच अमेरिकाको सैन्य ड्रोनले इरानको एयरस्पेसको अतिक्रमण गरेको भन्दै इरानी सैनिकहरूले होर्मुजको स्ट्रेट (जलप्रपात) माथिबाट त्यसलाई खसाइदिए । ड्रोन खसाइएपछि अमेरिकाका राष्ट्रपति ट्रम्पले इरानबाट ठूलो भूल भएको र उसले यसको मूल्य चुकाउनुपर्ने भनी बयान दिए ।
ड्रोन खसाएको सजायस्वरूप इरानमाथि आक्रमण गर्ने आदेश दिएर अन्तिममा ट्रम्पले त्यसलाई फिर्ता लिए । उनको यस कदमलाई केटाकेटीपन भन्दै पश्चिमी मिडियामा चर्को आलोचना भइरहेको छ ।
ट्रम्पले अनेकौं किसिमका बहुलट्ठीपूर्ण कदम चाल्ने गरेको भए पनि उनी युद्ध होस् र मान्छे मारिऊन् भन्ने चाहिँ नचाहने रहेछन् । त्यसैले यो आक्रमणका कारण थुप्रै मानिस मारिने भएपछि ट्रम्पले त्यसलाई रोक्ने आदेश दिएका हुन् ।
राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जोन बोल्टन, परराष्ट्रमन्त्री माइक पम्पिओ र सीआईएकी निर्देशक जिना हास्पेलले ट्रम्पलाई इरानमाथि आक्रमण गर्न निकै जोड गरेको भए पनि हताहती नहोस् भनेर उनले आक्रमण रोक्न लगाए ।
ट्रम्पले टाइम पत्रिकासँगको अन्तर्वार्तामा इरानसँग सैन्य युद्ध नचाहेको बताएका छन् । इरानले आणविक हतियार विकास गर्न छोडेमा आयातोल्लाहसँग वार्ता गर्न आफू तयार रहेको बयान पनि दिएका छन् । ट्रम्पले सैन्य आक्रमणको डर मात्र देखाउने र वास्तवमा आक्रमण नगर्ने बरू यसलाई सम्झौताको माध्यम बनाउने गरेका छन् । उत्तर कोरियामाथि अग्निवर्षा गर्ने धम्की दिएको केही समयपछि नै उनले किम जोङ–उनसँग शिखरवार्ता गरेको कुरा यहाँ स्मरण गर्न सकिन्छ ।
तर ट्रम्पका सल्लाहकारहरू इरानमाथि आक्रमणका लागि उनलाई भड्काइरहेका छन् । अनि इरानका क्षेत्रीय शत्रुहरू साउदी अरब र इजरायल पनि उसमाथि आक्रमणका लागि अमेरिकालाई दुरुत्साहन गरिरहेका देखिन्छन् ।
ट्रम्पले इरानमाथि आक्रमण नगर्ने भने पनि युद्धको पृष्ठभूमि चाहिँ तयार पारेका हुन् । इरानसँग गरिएको आणविक सम्झौताबाट अमेरिकालाई झिकेर अनि उसमाथि कडा आर्थिक प्रतिबन्ध लगाएर ट्रम्पले नै युद्धको वातावरण बनाएका हुन् । उक्त प्रतिबन्धका कारण सिर्जना भएका क्रिया प्रतिक्रियामा ट्रम्प जिम्मेवार छन् भन्न त नमिल्ला तर यस्ता परिस्थिति निर्माणमा उनकै प्रमुख भूमिका छ ।
इरानले तेल बोकेका ट्यांकरमाथि आफूले आक्रमण गर्दै नगरेको बताउँदै आएको छ । आफूविरुद्ध षड्यन्त्र गर्ने शक्तिहरूले यो आक्रमण गराएको संकेत उसले दिएको छ ।
त्यसो त एक महिनाअघि बग्दाद स्थित अमेरिकी दूतावासनजिक भएको आक्रमणमा पनि इरानकै हात रहेको ट्रम्प प्रशासनले आरोप लगाएको थियो । अनि ओमानको खाडी हुँदै गइरहेका चारवटा तेल ट्यांकर इरानले नै ध्वस्त पारेको आरोप पनि उसले लगाएको थियो ।
तर यस्ता आक्रमण इरानलाई दोषी देखाएर युद्ध मच्चाउने षड्यन्त्र भएको विश्लेषकहरूले लेखेका छन् । हुन पनि अमेरिकाले झूटा कारण देखाएर युद्ध शुरू गरेको अनि युद्ध भएका देशलाई ध्वस्त पारेको प्रशस्तै उदाहरण भेटिन्छन् । नरसंहार गर्ने हतियार सद्दाम हुसेनले राखेको भन्ने आधारहीन आरोपको बलमा इराकमाथि आक्रमण गरेर अमेरिकाले उक्त देशलाई ध्वस्त पारेको धेरै वर्ष बितेको छैन ।
इरानविरुद्धको युद्ध चर्काउन युद्धपिपासु बोल्टनले पर्सियन खाडीमा अमेरिकी जलसेना र वायुसेना तैनाथ गरेको एक महिना मात्र भएको छ । इरानको आक्रामकतालाई प्रतिकार गर्न यसो गरेको उनले तर्क दिएका थिए ।
तर आधुनिक इतिहासमा इरानले कुनै पनि देशमाथि आक्रमण गरेको रेकर्ड छैन । पश्चिम एसियामा अमेरिकाले मच्चाएको विध्वंसपछि छाएको अस्थिरतामा इरान शक्तिशाली बनेर राजनीतिक प्रभाव बढाउँदै लगेको भए पनि उसले कुनै देशको अतिक्रमण भने गरेको छैन ।
तर इरानको आक्रामकताको बहाना बनाएर बोल्टन र पम्पिओ जस्ता युद्धपिपासुहरूले युद्ध चर्काउन भरमग्दूर प्रयास गरिरहेका छन् । तेल ट्यांकरमाथिको आक्रमणलाई त्यही युद्धको पूर्वाभ्यासका बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।
इरानलाई विश्वबाट अलग्याउने हिसाबमा अमेरिकाले उसमाथि कठोर प्रतिबन्ध लगाएको भए पनि वास्तवमा वाशिङटनको विश्वसनीयता संकटमा परेको छ । उसले झूटा बहानामा युद्ध शुरू गरेर संसारका विभिन्न क्षेत्रलाई तहसनहस पारेकाले ऊ आफैं चाहिँ विश्वबाट दुत्कारिएको छ भन्न मिल्छ । त्यसैले त अमेरिकाले इरानमाथि लाद्न खोजेको युद्धलाई युरोपेली मुलुकहरूले समर्थन गरेका छैनन् ।
अमेरिकाले झूटको पुलिन्दाका आधारमा इरानसँग युद्ध गर्न खोज्नु निन्दनीय छ । आणविक हतियारमा वृद्धिदेखि आतंकवादलाई प्रायोजन गर्ने साउदी अरबलाई सहयोग लगायतका कदम चालेर अमेरिकी शासकहरूले विश्व समुदायविरुद्ध गम्भीर अपराध गरिरहेका छन् । युद्ध भड्काउनका लागि उनीहरू झूटा आक्रमण (फल्स फ्ल्याग अपरेसन) गर्न पनि हिचकिचाउँदैनन् ।
विश्वशान्तिका पक्षधरहरूलाई अमेरिकाको पछिल्लो कदमले झस्काएको छ । अमेरिकाका युद्धपिपासु सम्भ्रान्तहरूले जुन देशमा युद्ध शुरू गरेका छन्, त्यस देशलाई मात्र नभई वरपरका क्षेत्रलाई समेत ध्वस्त बनाएर अस्थिर बनाएका छन् । त्यही अस्थिरताको पृष्ठभूमिमा इस्लामिक स्टेट जस्ता हिंस्रक आतंकवादी समूहहरू जन्मिने गरेका छन् । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले अमेरिकाले शुरू गर्न खोजेको आपराधिक युद्धलाई रोक्ने प्रयास गर्नुपर्छ ।
अमेरिकाले अब उप्रान्त कुनै पनि विदेशी युद्ध नलड्ने भन्दै चुनाव जितेका ट्रम्पले आफ्ना युद्धपिपासु सल्लाहकारहरूको कुरा सुनेर युद्ध चर्काउलान् ? त्यो त समयले नै बताउनेछ ।
यी हुन् विश्वकै महँगा हिरा, कति छ मूल्य ? काठमाडौं– हिरालाई सबै गहना मध्ये सर्वश्रेष्ठ मानिदै आएको छ । यही कारणले अन्य रत्नको तुलनामा यसको मूल्य पनि महँगो पर्ने गरेको छ । विश्वमा यस्ता हिरा पनि छन्, जसको मूल्य अर्बौ रुपै...
नेपाल–म्यानमार सम्बन्ध नयाँ उचाइमा